မြန်မာပြည်နှင့်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » မြန်မာပြည်နှင့်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20
Posted by မိုးနတ်သားလေး on Oct 15, 2011 in Critic, Politics, Issues |2comments
ယခုခေတ်ဟာ2011ရာစုနှစ်အားဖြင့် နှစ်ဆယ့်တရာစုရောက်နေပြီလေ။ ဒါပင့်မဲ့အိုင်တို့မြန်မာပြည်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်20လောက်ကလောက်တောင်မချမ်းသာတဲ့ အပြင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့မွဲပြီးဆင်ရလြာတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုမွဲတထက်မွဲ ပြာတထက်ပြာအောင်ဘယ်သူတွေလုပ်နေလဲဆိုတာအိုင်မသိဘူးလေ။
သိလည်း ပြောရဲပါဘူးနော်ဟုတ်ဘူးလား။ မြန်မာပြည်လွန်ခဲ့အနှစ်20ပြန်လည်အောင်မေ့မိတယ်လေ။ ဘာလိုလဲဆိုတောခုနှစ်အားဖြင့်1994လောက်တောမြန်ာမပြည်ဟာတခါးပိတ်စီးပွားရေးဝါလေ။ မတိုးတက်
မခေတ်မီသေးဘူးနော်။ ဒါပင်မဲ့မဆင်းရဲတာတောအမှန်လေ။ ဆင်းရဲတဲ့ သူတွေကလည်း ရွှေဂေါင်းပြောင်လို့ မြန်မာပြည်မှာခေါ်တဲ့ ဘဲဥလောက်က
အလုံးများများမိသားစုတစု လောက်လောက်ငငစားနိုင်တယ်လေ။ အဲဒီကစပြီးတောတဖြည်းဖြည်းနဲ့1996နှစ်ကြသောvisiting myanmar လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာပြည်နှင့်နိုင်ငံတကာကူးလူးဆက်ဆန်ရေးဆိုတဲ့ တခါးဖွင့်ဝါဒစတင်ကျင့်သုံးလိုတာလေ။ အဲဒီကစပြီးတောမြန်မာလူမျိုးတွေလည်း တဖြည်းဖြည်းဆင်းရဲလာလိုက်တာအခုတောချမ်းသာတဲ့ သူတွေမှာဘဲဥဆိုတဦးတလုံးကျ စားရတဲ့ ဘ၀မျိုးရောက်နေပြီလားတောမသိဘူေးလ။
အဲဒီဟာတွေဖြစ်ချိန်တန်လိုဖြစ်လာတယ်လေ။်ဲဒီစစ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုမစဥ်းစားဘဲကိုယ်ကောင်းစားဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ လူတချို့ကြောင့်မြန်မာပြည်ခေတ်လဲနောက်ကျနိုင်င့လည်း မွဲတေလာပြီး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာရှိသေးရင်သူနိုင်ငံသူအရ တိုက်ပေးခဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဘယ်လောက်များကြည့်ကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းလိုက်မလဲဆိုတွေးကြည့်တာနဲ့တင်သိနိုင်တယ်နော်။ မြန်မာပြည်နှင့်အိုင်တိုဗိုလ်ချုပ်အဆက်သွယ်ဖြတ်တာနှစ်20ကျော်လေ။
ဒင်းတို့တွေသေသွားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် မျက်နှာကြည့်ရမှာကြောက်လဲေ ကြာက်ရှက်လည်း ရှက်လို့နဲ့တူတယ်ထင်ပါတယ်လေ။ ကျောင်းတွေအိုင်တို့ငယ်ငယ်ကဆိုနိုင်ငံတော်အလံအောက်ဗိုလ်ချုပ်ပုံလေ အမြဲအလေးပြုနေရတာကိုသွေးထဲမှာပိုးကောင်လေးတွေ
အိုင်တို့၈တန်းနှစ်လောက်စပြီးတော ဗိုလ်ချုပ်ပုံဖြုတ်တယာက်ယောက်ပုံကောက်တပ်ကတည်းက အိုင်တို့တွေနိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုရတာတောင် အရသာမရှိတောဘူးလေ။
အာလုံးပြောချင်တာတွေ သိချင်တာတွေအများကြီးပါလေ။ အိုင်လည်း သိပ်မပြောရဲဘူးလေ။ အခုခေတ်ရောက်ပင်မဲ့ အိုင်လွန်ခဲ့တဲံနှစ်20လောက်ပြန်လွမ်းနေမိတယ်လေ။
အိုင် တွေ ယူတွေသုံးမနေပါနဲ့
ဆိုပြီး နောက်တခါ ဇူစကာစစ်ဆင်ရေးလို့အမည်တပ်ပြီး ကုန်သည်ကြီးတွေကို
အင်းတွေ အိုင်တွေ လက်ဖွဲ့ တွေ များနေတော့ နဂိုက မူးနေတာ ပိုမူးသွားပြီ။
ဒီမယ် …အိုင်ဆေး …မြင့်မူး…..
မင်းတို့ထွင်ထားတဲ့ ” ပေါ့နော် ” ဆိုတဲ့ စတိုင်လ်နဲ့နည်းနည်း ၀င် ဖောလ် လိုက်ဦးမယ်။
တကယ်လို့ ပေါ့နော်…. မင်း ပြောတဲ့ အိုင်တို့ဗိုလ်ချုပ် ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဗမာ
ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ပဲ ခေါ်မလားပေါ့နော်…. အဲဒီဟာလေးနဲ့ကုလားဖြူကို မတော်လှန်ခဲ့ဘူး
ဆိုရင် ပေါ့နော်…..ဒို့ တိုင်းပြည်ဟာ အနည်းဆုံးတော့ အခုခေတ်မှာ အင်္ဂလန်ကို ဗီဇာ မလိုပဲ သွား
ကောင်း သွားနိုင်လောက်မယ် ပေါ့နော်…..ဒို့ တွေဟာလဲ ကုလားဖြူစကားကို အရှေ့ တောင်အာရှမှာ
ကုလားဖြူ လေသံ အတိ်ုင်းပြောနိုင်တဲ့ နိုင်ငံလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့နော်….
မင်းတို့ အခု မြင်တွေ့ နေရတဲ့ ၁၀၉/၁၁၀ ကွမ်းတမြုံ့ မြုံ့ နဲ့ဂျလေဗီတွေလဲ မြင်ချင်မှလဲ မြင်ရမှာပေါ့နော်….
လူပြိန်းတွေး တွေးကြည့်တာကို ပြောကြည့်တာပေါ့နော်….